Iinoveli ezi-6 zamagama amabhinqa aphumeleleyo | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Inoveli, Inoveli emnyama, Inoveli yothando
Ukukhawulezisa lo-infernal ka-Agasti ogqiba ukuthamba, ndiza kuthi ndlela-ntle ngenye indlela Iinoveli ezingama-6. Zisayinwa ngamagama avunyiweyo e ababhali bazo zonke iintlobo ngomngxunya wayo sele umiselwe kwi-panorama. Kodwa kukwakho namagama amatsha aphumeleleyo ngokunjalo. Zezi.
1 Kwintliziyo yefjords - uChristine Kabus
2 Ngokukhawuleza - Malin Persson Giolito
3 Ngaphambi kweMvula- uDina Jeffers
4 Ulahlekile-CL Taylor
5 Umhla wokuzalwa - uMarie-Sabine Roger
6 Intombi kaMgcini Nyosi - iSanta Montefiore
Kwintliziyo yefjords - UChristine Kabus
UKabus wazalelwa e 1964 en IWurzburg. Ube ngumncedisi kumlawuli, umbhali wemidlalo kunye nombhali wesikrini kumdlalo kamabonwakude aliqela. Wayesoloko enomdla ngu imihlaba yaseScandinavia ngokuba ngumfundi ka-Astrid Lindgren, phakathi kwabanye ababhali abavela kula mazwe. Kodwa ngokuqinisekileyo wayethakathiwe bubuhle be ENorway kakhulu kangangokuba waqala ukufunda ulwimi kunye nokufunda ngembali yalo. Iziphumo ziye le noveli kukuqala kwakhe.
Sikwi-2010 ngo Umntase. ULisa ngumfoti ophumeleleyo UmJamani owathi, emva kokubhubha kukanina, wafumana ipasile evela kummeli wosapho. Oku kuqukethe medallion yamandulo kunye nefoto yexesha lomlo kunye neleta evela kunina. Lo mfanekiso uza kumsa kwidolophu ethe cwaka yeNordfjordeid, eNorway. Yi umkhondo omnye kaLisa ukufumanisa ukuba ngoobani ngokwenene ookhokho bakhe.
intlabathi -UMalin Persson Giolito
UMalin Persson Giolito wazalelwa kwi Stockholm en 1969. Igqwetha kweyona fem yomthetho inkulu kumazwe aseNordic nayo ibikhona Igosa leKhomishini yaseYurophu eBrussels, apho ahlala khona nomyeni wakhe kunye neentombi ezintathu. Wayesele epapashe iincwadi ezintathu, kodwa yile iye yaba njenge impumelelo eSweden kwaye sele ihleliwe kwi Amazwe e-24. intlabathi Wayekhethiwe Owona mdla mhle woNyakaIbhaso loncwadi elisemthethweni elinikwe ngu Isikolo saseSweden saBabhali beMfihlakalo.
Khawusixelele malunga ne Ukubulawa kwabantu esikolweni ukusuka kwenye yezona ndawo zityebileyo eStockholm. UMaja norberg, olahlekelwe ngumfana athandana naye kunye nomhlobo wakhe osenyongweni, uyarhanela kwaye uvalelwe ngokuzibandakanya kwakhe kolo hlaselo. UMaja wayeyintombazana elungileyo kwaye enoxanduva de wadibana USebastian umlingisi, unyana kaBillionaire onamandla eSweden. Uyingozi kwaye uyakhazimla, uFagerman uyamrhwebeshela ngaphakathi aze amphose kwihlabathi le-vuhambo, amaphenyane, amatheko amnandi, isini kunye neziyobisi. Ke ngelo xesha waphulukana nolawulo? Ngaba inyani umbulali obandayo okanye omnye nje umntu ofikisayo olahlekileyo?
Phambi kweemvula -UDina Jefferies
UJefferies ngumbhali IBritane eyazalelwa eMalaysia ngembali ende. Ukwangumbhali we amabali kunye namanqaku.
En Phambi kweemvula sidibene no eliza, Umfazi ozimeleyo kakhulu kuluntu lwaseBritane lwamashumi amathathu. Yi umfoti kwaye, emva kokuphulukana nomyeni wakhe ngengozi, ibuyela eIndiya xa iceliwe yolawulo lwaseBritane. U-Eliza kufuneka afote kusapho lukaMaharaja waseRajputan Kwaye ngenxa yoko uya kuhlala ebhotwe lakhe. Kodwa ayizukuba ngumsebenzi olula.
Amayelenqe, ukungavisisani, abalinganiswa abenza iyelenqeU-Eliza uya kuba nomlingani omnye, Jayant, umntakwabo omncinci okhangayo waseMaharaja. Zombini ziya kufumanisa ukuba zabelana ngezinto ngokufanayo, kodwa ubudlelwane babo abuqondwa okanye bamkelwe kwi-India yobukoloniyali yamashumi amathathu. Ke kuya kufuneka bakhethe ukuba sithathe siphi isikhundla.
Kulahlekile -Cl Taylor
Taylor wazalwa e EWorcester, I-United Kingdom, kwi 1953. Bekulapho eBrighton apho aphuhlise khona umsebenzi wakhe wobungcali njengomzobi wewebhu kunye noyilo lewebhu. Ngaba une hit enkulu ngethamsanqa ngokwasemphefumlweni Imida yokuthula (2014).
Le noveli intsha isixelela ukunyamalala kolutsha, UBilly Wilkinson, apho Umama wakhe, uClaireUziva enetyala, nangona ingenguye yedwa kusapho. Zonke iiWilkinsons zigcina iimfihlo, Kodwa uClaire uqinisekile ukuba abahlobo bakhe kunye nosapho babengenanto yakwenza nokulahleka. Okanye yile nto ucinga ngayo.
Usuku lokuzalwa - UMarie-Sabine Roger
Uzalwe e 1957, lo mbhali IsiFrentshi uhlala eCharente kwaye ujolise Inoveli yolutsha, enezihloko ezingaphezulu kwekhulu kwikhondo lakhe lomsebenzi. Kodwa wazimisela kuncwadi lwabantu abadala kunye nothandekayo Imini yam yasemva kwemini noMargueritte, eyayilungiselelwe i-cinema kunye no-Gérard Depardieu njenge-protagonist kunye endikucebisa kakhulu.
Usuku lokuzalwa Sixelele kwithoni eqhelekileyo Ibali le Mortimer DiFunto, eza kubhiyozela iminyaka engamashumi amathathu anesithandathu ngokulusizi. Kwaye oko kusoloko kunjalo wonke umntu amadoda osapho lwakhe aswelekile, ngaphandle kokukhetha kwaye ngenxa yezizathu ezahlukeneyo, ngentsimbi yeshumi elinanye kusasa iminyaka engamashumi amathathu anesithandathu.
Ke ubumdaka khange wenze naziphi na izicwangciso kwaye urhoxile. Kodwa, ngaphandle kokwazi ukuba kutheni, ngalo mhla ukufa akunakufikelela kuye kwaye uMortimer kufuneka afunde ukuhlala kwakhona kunye namanye amathandabuzo kunye nemibuzo.
Intombi yomgcini nyosi -USanta Montefiore
UMontefiore ngomnye umbhali Ibritish uzalwe e 1970 Iinoveli ezininzi eziphumeleleyo kwihlabathi liphela ezinje, Emthunzini we-ombú. Eyokugqibela ikwayi- isihloko esitsha sothando ekudala ikho phezulu kwiitshathi zentengiso eGreat Britain. Ibalisiwe kumaxesha amabini, isixelela ibali lika abafazi ababini Baza kufumanisa ukuba kukho amabali othando aziphindayo ngamandla afanayo ngaphandle kweminyaka.
En 1973 I-Trixie valentine Uthandana nemvumi yeqela eliphumeleleyo, uJasper Duncliffe afuna ukukhululeka kwaye aphile ngokugqibeleleyo. Uyala ukufana nonina, umfazi odibeneyo ongenalo elinye ibhongo ngaphandle Khathalela iinyosi, apho kubonakala ngathi iyanxibelelana. Kodwa emva koko uJasper ufumana iindaba ezimbi ezimkhokelela ekubeni abuyele eNgilane.
Kwaye ngaphakathi 1933 UGrace hamblin Wakhulela eWalbridge, eNgilani kunye noyise, Umfuyi wezinyosi ovela kusapho lweengcungcu. Xa esweleka ngokungalindelekanga, umshiya yedwa kwaye ulahlekile. Ngoku uqhekekile phakathi Zibophelele kuFreddie Valentine, uthando lwakho lomntwana kunye nomhlobo, okanye uvumele ukuba uthathwe ukuthanda kwakhe iNkosi Melville, uthando olungenakwenzeka. Isigqibo sakho iya kuba neziphumo Kwiminyaka engamashumi amane kamva kwaye bobabini, umama nentombi, kuya kufuneka bajongane nexesha elidlulileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » Iinoveli ezi-6 zamagama amabhinqa aphumeleleyo
Ngo-1984, usuku olunje namhlanje, uTruman Capote wasweleka